Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. नेपाल भारत सिमा विवाद उत्कर्षमा – Emountain TV
काठमाडौ, १५ जेठ । नेपालको भारतसंगको आयात अन्य मुलुकको तुलनामा निकै असन्तुलित छ । भारतसंग नेपालले जति मात्रामा आयात गर्छ त्यसको तुलनामा एकदमै न्यून निर्यात गर्छ । नेपालबाट वर्षेनी अर्बाै रुपैयाँ असुल्दै आएको भारतले नेपालको भूमि समाबेश गरेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसंगै आयात रोकेर भोकै बनाउने धम्की दिदै आएको छ ।
अहिले नेपाल भारत सिमा विवाद उत्कर्षमा पुुगेको छ । नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसंगै भारतीय मिडियाले एकतर्फी रुपमा भारतीय आयातित सामाग्री रोकिदिने धम्की दिदै आएका छन । खाद्यन्न रोकिदिने तथा भोकभोकै बनाइदिने भन्दै नेपाललाई तुच्छ चुुनौती दिदै आएको छ ।
भारतीय सरकार र मिडियाहरुलाई लागिरहेको छ की आयात रोकिदिदा नेपालीहरु बाँच्न सक्दैनन । भोकको छटपटीले नै मर्दछन । भारत मात्र कहाँ हो र ? अधिकाशं नेपाली पनि यो भ्रमबाट पछाडि हटन सकेका छैनौ । किनकी हामी हाम्रो वास्तविकता जान्न र आफुले आफुलाई नै विश्वास गर्न अहिलेसम्म सकिरहेका छैनौ ।
वाणिज्य तथा आपुुर्ति मन्त्रालयबाट जारी श्वेतपत्रमा नेपालले आयात गर्ने मुलुकमा सबैभन्दा बढि भारत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷ ७६ को आयात तथा निर्यातको सर्वेक्षणलाई मात्र हेर्ने हो भने भारतबाट आयातित हुने सामाग्री ७० प्रतिशत रहेको छ । जुन अन्य मुलुकबाटभन्दा निकै बढी हो । तर नेपालबाट भारतमा हुने निर्यात अत्यन्तै कम रहेको छ ।
आयातमार्फत नेपालले भारतलाई आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मात्र १८ अर्व बराबरको योगदान गरेको छ । जुन दक्षिण एसियाली मुलुकमा मात्र होइन अन्तराष्ट्रिय स्तरमा हुने आयातको सबै भन्दा बढि हो ।
आयातित बस्तुको मुल्यको मापनको सर्वेक्षणलाई हेर्दा नेपाल भारतसंग आयातित बस्तु तथा सेवामा मात्र निर्भर रहेको स्पष्ट देखिन्छ । आर्थिक रुपमा भने होइन । आयात मार्फत एक वर्षमा १८ अर्ब बराबरको योगदान पु¥याएको मुलुकलाई भारतले भने अनुदानको नाममा तिनदेखि चार अर्व वितरण गर्दैे आएको छ ।
भारतप्रति हामी अनुुग्रहित हुनुपर्छ । हामी भारतविना बाँच्न सक्दैनौ छिमेकीलाई रिसाउन दिनु हुँदैन भन्ने मानशिकताका कारण आज दिन प्रतिदिन भारतको हेपाह प्रवृत्ति बढदै गएको छ । कोरोना भाइरसका कारण अहिले लाखौ नेपालीहरु स्वदेश भित्रिएका छन ।
अव विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्देै हामीसंग भएका साना साना कुरामा पनि अवसर खोज्दै अगाडि बढे भारतसंग बर्सेनी आयात मार्फत तिर्देै आएको १८ अर्व रुपैयाँ स्वदेशमै परिचालन हुन सक्छ । देश आर्थिक रुपमा अव्बल हुनुका साथै हेपाह प्रवृत्ति देखाउने छिमेकीलाई गतिलो झापड मिल्ने थियो ।
सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न नसक्ने महासंघको निर्णय
ट्रम्पको वित्तीय विवरण परीक्षण गर्न पाउने अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतकाे फैसला
मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै नेविसंघको ज्ञापनपत्र
लकडाउनका कारण दाङका ५ हजार भन्दाबढी यातायात मजदुरका परिवारको बिचल्ली